CAN-स्प्याम कहिले विगतको ईमेल विकसित हुनेछ? | Martech Zone
CAN-स्प्याम कहिले विगतको ईमेल विकसित हुनेछ?
सोमबार, सेप्टेम्बर 18, 2006 बिहीबार, जुन 18, 2015 Douglas Karr
FTC ले हालै केहि धेरै स्पामरहरू बन्द गरेको छ। स्पाम अझै ठूलो समस्या हो, म दिनमा एक सयौं सन्देशहरू पाउँछु। म ईमेलहरू फिल्टर गर्न सक्थें (म मेलवाशर प्रयोग गर्थें) तर छोडिदिएँ। त्यहाँ अन्य विकल्पहरू छन् - स्प्याम सेवा प्रयोग गरेर प्रत्येक व्यक्तिले मलाई ईमेल गर्न आधिकारिक हुन आवश्यक गर्दछ, तर म पहुँचयोग्य भएको चाहन्छु।
अब समस्या फैलिन्छ। म मेरो ब्लगमा टिप्पणी र ट्र्याकब्याक स्पाम पाउँछु। प्रत्येक दिन, म लगईन गर्छु र to देखि १० सन्देशहरू छन् जुन अकिस्मेटले समातेको छैन। तिनीहरूको कुनै दोष छैन - तिनीहरूको सेवाले मेरो ब्लगमा ,5००० भन्दा बढी टिप्पणीहरू स्प्याम समात्यो।
FTC ईमेलबाट टाढा अन्य प्रकारको स्प्यामसँग कहिले सम्मिलित हुनेछ? मलाई लाग्छ कि यो ठूलो तुलना हो ... म धेरै सवारी ट्राफिकको साथ ठूलो सडकमा पसल किन्छु। म भित्र पस्ने बित्तिकै र सडकमा स्प्याम शपले मलाई फेला पारे, तिनीहरू मेरा केही ग्राहकहरू लिन चाहन्छन्। त्यसोभए - उनीहरूले मेरो स्टोरको विन्डोमा उनीहरूको स्टोरको विज्ञापनमा पोस्टरहरू लगाउँदछन्। उनीहरूले मलाई अनुमति माग्दैनन् - केवल यो गर्छन्।
यो त्यस्तो छ कि कसैले मेरो स्टोरफ्रन्टमा उसको स्टोरमा पोष्टर हे hanging्ग गर्दै। किन यो अवैध छ?
वास्तविक संसारमा, म यो रोक्न सक्षम हुन्थें। म व्यक्तिलाई रोक्नको लागि सोध्न सक्छु, पुलिसलाई रोक्नको लागि भन, वा अन्ततः म उनीहरूलाई मुद्दा हाल्न सक्छु वा आरोपहरू दबाउन सक्छु। यद्यपि, इन्टरनेट मा, म यो गर्न सक्दिन। मलाई स्प्यामरको ठेगाना थाहा छ ... मलाई उनको डोमेन (उहाँ कहाँ बस्नुहुन्छ) थाहा छ। म कसरी उसलाई बन्द गर्न सक्दिन? मलाई त्यस्तो देखिन्छ कि हामी उही समान आपराधिक र नागरिक कार्यहरूको लागि किन्नु पर्छ जुन मेरो स्टोरफ्रन्ट (ब्लग) वास्तविक सडक ठेगाना थियो।
यो विधान विस्तार र यी कानूनहरु पछाडि केहि टेक्नोलोजी राख्ने समय हो। मलाई लाग्छ कि स्प्यामर आईपी को एक सर्वर को लागी दुनिया भर मा नाम सर्वरहरु को आधार मा ब्लक गर्नु पर्छ। यदि व्यक्ति तिनीहरू समक्ष पुग्न सकेनन् भने तिनीहरू रोकिनेछन्।
टैग: स्प्यामईमेलईमेल नियमनftcस्पाम नियमन
विन्डो वारहरू ... स्थान, स्थान, स्थान